मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रदेश प्रमुख पनि हट्ने
काठमाडौँ, असार २२ गते । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सातवटै प्रदेशका प्रमुख समेत हट्ने भएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सात वटा प्रदेश प्रमुखको हकमा समेत लागु हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म लोकसेवा आयोग वाहेक अन्य प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति भएकाको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय लागू हुने जानकारी मन्त्री तामाङले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा) सङ्कलन गरेर गरिएको छनोटलाई प्रतिष्पर्धा भन्न मिल्दैन, त्यो पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।”
अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले दुब्र्यवहार गरेका आरोप लगाउँदै प्रवक्ता शर्माले काँग्रेसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिनुभयो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले डा. केसी, आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर अध्यादेश जारी गरेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
डा. केसीले राखेका मागको तत्काल सुनवाई गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न समेत उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले केही दिनअघि ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरीत रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।